မရေရာတဲ့ ဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ – Live the Dream
ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ချင်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာမှန်းမသိတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ ရှိခဲ့ဖူးလား.. လမ်းပျောက်နေတဲ့ နေ့ရက်တွေပေါ့။ ပညာရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေမှာ အောင်မြင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးရှိပေမယ့် ရည်မှန်းချက်တိတိကျကျမရှိတဲ့ လက်လှမ်းမှီသမျှကောင်းနိုးရာရာတွေကို ပဲ လုပ်နေကြတော့ ကိုယ်ဘာကောင်လဲ မသိတာတော့ မထူးဆန်းလှပါဘူး။ ဘာလို့ ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေရတာလဲ? ဘယ်လိုပြန်ပြီးတည်ဆောက်ရမလဲ? မေးခွန်းတွေက များလွန်းနေတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ထုတ်မပြောခဲ့ပေမယ့် လမ်းပျောက်တဲ့အဖြစ်က ဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးက ဒီလိုအခြေအနေတွေကို ပြောင်းလဲပစ်ချင်တယ် တိုးတက်ချင်တယ်။ နယ်ပယ်ကျဉ်းကျဉ်း၊ အတွေးအခေါ်ကျဉ်းကျဉ်း၊ အရည်အချင်းနည်းနည်းနဲ့ခရီးမဆက်ချင်ဘူးလေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ဒါ့ကြောင့် မရေရာမသေချာတဲ့ လမ်းတွေကိုထားခဲ့ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ပုံစံကို မြင်စေချင်တဲ့အတိုင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည့်အတိုင်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲ ကြည့်ရအောင်နော်
၁။ အတိတ်ဆိုးကို ထားခဲ့ပါ
အခုအချိန်မှာ ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင် အတိတ်က တော်တော်ညံ့ခဲ့တာကို ထပ်ပြီး ခံစားနေဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ စိတ်ပျက်အားလျော့စရာမလိုဘူး။ ဦးနှောက်က ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက်တွေ၊ မကျေနပ်မှုတွေ ကို ပိုမှတ်မိတတ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Negative တွေးမိတဲ့အချိန်တွေများတယ်ဆိုတာမှန်ပေမယ့် ဒီလိုအတွေးက စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းစေပြီး ရှေ့ဆက်သွားမယ့်ခရီးမှာ နောက်ပြန်ဆွဲနေတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအမှန်ကို မြင်ရဖို့အတွက် တည်ဆောက်ချိန်မှာတော့ အတိတ်ဆိုးတွေကို ထားခဲ့ဖို့ မေ့ပစ်ဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ်တည်ဆောက်မယ့် ကိုယ့်ပုံစံထဲမှာ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ လုပ်ရပ်တိုင်း မှန်ကန်နေဖို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ သွားရမယ့်ခရီးမြန်မြန်ရောက်ဖို့၊ ခရီးတွင်ဖို့ ဖြတ်လမ်းနည်းသုံးချင်တာတွေ၊ သူများကို ခြေထိုးတာတွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်အမှားတွေ မဖြစ်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်၊ သွားချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာ လူတွေကို မကူညီနိုင်သေးရင်တောင် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလို လိပ်ပြာလုံစေမယ့် လုပ်ရပ်တွေ၊ Personality ကောင်းတွေကိုတော့ ဘာပဲလုပ်လုပ်မေ့ထားလို့မရပါဘူးနော်..။ မဟုတ်ရင် လူတွေရဲ့ နှာခေါင်းရှုံ့စရာ၊ အထင်သေးစရာဖြစ်နေမှာပေါ့။ ကောင်းတာပဲလုပ်၊ မှန်တာပဲလုပ် ဘယ်သူ့မျှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလေ။ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေ ရှိနေပြီဆိုရင် ဆက်လိုက်ကြစို့
၃။ သူတို့စံနှုန်းကို မေ့လိုက်ပါ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သက်သေပြဖို့ လူတွေကို ကြိုးစားပြနေစရာမလိုဘူး ဆိုတာလေးကို မှတ်ထားစေချင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကို မြင်တဲ့အမြင်က သူတို့ရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုသာြဖစ်တယ်။ ကိုယ်က အဲ့တာထက်လုပ်နိုင်သလို၊ အဲ့လောက်ထိမလိုက်နိုင်တာလည်းရှိတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေကို ဆုံးဖြတ်ပေးတာမျိုးက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်မတိကျဘူး။ သူတို့ မြင်စေချင်တဲ့အရာဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပုံသွင်းရတာမျိုးဆို ပင်ပန်းလှတယ်။ ကိုယ်ဘယ်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကြီးက လွယ်ကူမနေဘူး။ ဒါ့ကြောင့် လူတွေသတ်မှတ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စံနှုန်းအတိုင်းသွားနေတုန်းဆို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။ မေ့လိုက်ပါ။ ကိုယ့်အိမ်မက်ကို ကိုယ်တိုင်ဆုပ်ကိုင်ပါ။ လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုသာ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ။ သူများလိုချင်တဲ့ကိုယ့်ပုံစံမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ဟာကိုယ့်ပုံစံအတိုင်းရှိနေဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
၄။ လောဘ နောက်မလိုက်နဲ့
မတည်ငြိမ်သေးတဲ့လူတွေရဲ့ သဘောမှာ အမြတ်ပဲလိုချင်တယ့်စိတ်တွေ အားကြီး တတ်တယ်။ ပေးတာထက် အဆပိုကြီးတဲ့အရာတွေ ပြန်လိုချင်တယ်။ သူများတစ်ဆ ရရင် ကိုယ်လည်း တစ်ဆရချင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ခြားသူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး အခွင့်အရေးနည်းလို့ သွေးပျက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့။ လောဘစိတ်တွေက ဒီလိုနေရာမှာတော့ ထားသင့်တဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူး။ အောင်မြင်တာကို အားကျပြီး ပြေးလိုက်နေစရာမလိုဘူး။ အခွင့်အရေးဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုမှ ရှောင်လို့မရလို့ အဓိကက ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းနဲ့ဆက်လက်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတာပါ။ အချိန်တန်ရင် ကိုယ်ရဲ့ရလာဒ်က ဘယ်သူနဲ့မှ မတူနိုင်ဘူး..ကိုယ့်ကြိုးစားမှုကသာ ကိုယ့်ပုံစံလေးဖြစ်နေမှာ.
၅။ မမေ့သင့်တဲ့ တန်ဖိုး
ပညာရေးဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်အကိုင်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ကြိုးစားတဲ့အချိန်လေးမှာ အလုပ်မဖြစ်တာတွေ၊ ကျရှုံးမှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ လဲမသွားပဲ ကိုယ့်ရဲ့ ပန်းတိုင်ရဲ့ ရလာဒ်ထွက်လာတဲ့အထိဆက်သွားဖို့လိုပါတယ်။ အိမ်မက်တစ်ခုရဲ့ တန်ဖိုးက ရလာဒ်အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်တဲ့။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ရလာဒ်မမြင်ရမချင်းကြိုးစားရမှ ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ က အပေါစားမဆန်တဲ့အရာတစ်ခုလို့သတ်မှတ်လို့ရမှာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် ရည်မှန်းထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ပုံစံ၊ တန်ဖိုးတွေကို မမေ့ပဲ အားယူပြီး ဆက်လက်ကြိုးစားသွားဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ဖြစ်ချင်တဲ့ တန်ဖိုးကြီးအိပ်မက်တွေကို ရောက်အောင်သွားပြီး ဖမ်းဆုပ်ပါနော်
လူငယ်တွေမှာ စိတ်ကူးကောင်းတာ သဘာဝဖြစ်သလို စိတ်ကူးလွန်းတာလည်း သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးကြည့်လိုက်တာနဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်စုံမယ်၊ အခက်အခဲတွေကျော်လွှားနိုင်မယ် ဒီလို စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရတာကြောင့် လူတိုင်းကြိုက်တာမဆန်းပါဘူး။ဒါပေမယ့် စိတ်ကူးကလွယ်ပေမယ့် effort ကတော့ ထင်သလောက်မလွယ်ပါဘူး? စိတ်ကူးသာရှိတယ် ဘာမျှမလုပ်ပဲ ရေသာခိုရင်တော့ ကိုယ့်ပုံစံကို တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ကူးယဉ်တာတွေက အတိုင်းအတာထားဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ကူးထဲမှာ သာယာပြီးမျှောနေလို့ အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ စိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာပြန်ရင်လည်း ပူဆွေးနေရဦိးမှာ။ စိတ်ကူးတာတွေလျှော့၊ ရေသာခိုနေတာလေးကိုလျှော့ပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပြီး ပညာရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေမှာ အသီးအပွင့်တွေခံစားလိုက်ပါနော်။